Madaxweynaha: “Soomaaliya waxay saddexdii sanno ee la soo dhaafey guulo waaweyn ka soo hoysey dagaalka ka dhanka ah argagixisada” – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxweynaha: “Soomaaliya waxay saddexdii sanno ee la soo dhaafey guulo waaweyn ka soo hoysey dagaalka ka dhanka ah argagixisada”
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeybgaley Shir Madaxeed gaar ah oo looga hadlayey la dagaalanka kooxda ISIL iyo xagjirnimada, kulankaas oo uu martigeliyey Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, kana dhacay xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York oo uu ka socdo Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgaley inta badan hoggaamiyeyaasha caalamka, iyagoo ka doodayey sida loola tacaalayo caqabadaha la xiriira la dagaalanka argagixisada caalamiga, iyo sida looga hortagayo faafitaanka xagjirnimada hubeysan.
“Dunida waxay aragtey isku dayada fuleynimada ku dheehan ee Al Shabaab ku dooneyso inay ku carqaladeyso horumarka Soomaaliya. Weerarada waxashnimada ah ee ay ka geysteen dalalka deriska ee Bariga Afrika waxay muujiyeen in khatarta argagixisada aaney ku koobneyn oo keliya xudduudaha Soomaaliya”.
“Guulaha Soomaaliya ee dhinaca la dagaalanka argagixisada saddexdii sanno ee la soo dhaafey waxaa ay muujiyeen in Al Shabaab laga guuleysan karo. Soomaaliya waa dalka keliya ee awooday inuu si wanaagsan dhulkiisa ugu jebiyo koox argagixiso caalami ah.”
Saddexdii sanno ee la soo dhaafey, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay dib u xoreysey magaalooyin dhowr ah iyo saldhigyo. Al-Shabaab, oo mar gacanta ku haysey inta badan Koonfuurta Soomaaliya, ayaa waxaa laga saarey boqolkiiba 80 dhulkii ay ka talinayeen. Hawlgalka looga guuleystey Al Shabab oo ay wada fuliyeen Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM, waxaa uu muujiyey in Al Shabaab ay u nugul yihiin hawlgalada milatari ee sida hufan la isugu dubbarido.
Istaraaatiijiyadda la dagaalanka argagixisada waxay Soomaaliya u suuragelineysaa inay kaga hortagto shabakadaha argagixisada, iyadoo laga hortagayo barnaamijyadooda, lagana xayirayo awoodaha ay u yeelan karaan inay si xor ah ugu fuliyaan falal argagixiso iyo inay qortaan dhalinyaro la qasbey ama maskaxda laga xadey oo ay ka dhigtaan malishiyaad u dagaalama. Waxaa kale oo istaraatiijiyaddan ay hay’adaha dowladda u saamaxayaan inay adeegyada bulshada ee aasaasiga ah u fidiyaan shacabka ku nool degaannada laga xorreeyay Al Shabaab, iyo in la baahiyo fariimo dadka looga digayo khatarta fikradaha khaldan ee takfiiriga ah iyo aydoloojiyadda xagjirnimada.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu baaqey dalalka Bariga Afrika inay sameystaan istaraatiijiyad loo dhan yahay oo looga hortagayo argagixisonimada si looga hortago khatarta argagixisada iyo xagjirnimada, isagoo intaa raaciyey in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay qorshahaasi qeyb ka noqoto.